सहज हुने भयो काठमाडौको जिवन, सातै दिन पसल खुल्ने अरु के के भए निर्णय ? – Kavrepati
Home / समाचार / सहज हुने भयो काठमाडौको जिवन, सातै दिन पसल खुल्ने अरु के के भए निर्णय ?
सहज हुने भयो काठमाडौको जिवन, सातै दिन पसल खुल्ने अरु के के भए निर्णय ?
admin June 28, 2021	समाचार Leaveacomment 402 Views
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्र जारी निषेधाज्ञा खुकुलो भएको छ। यद्धपी एकसाताका लागि भने निषेधाज्ञा थपिएको छ । थपिएको निषेधाज्ञामा धेरे कुरा खुकुलो पारिएको छ । निश्चित घण्टा मात्र संचालन गर्न पाउने पसल निर्वाध खुल्ने भएका छन् । कपडा लगायतका पसल पनि संचालन हुने भएका छन् । यसअघि पसलहरुलाई वर्गीकरण गरेर तोकेको दिनमात्र खोल्न दिइएको थियो। अब भने सबै प्रकारका पसल सबै दिन खुल्नेछन्।
ुपसलहरुमा लगाइएको बार प्रणाली हटेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जनाएका छज् । अब जुनसुकै बार जुनसुकै पसल खोल्न पाइने छ । तर, यसरी खोलिने पसलहरुमा समय भने तोकिएको छ। खाद्यान्नका पसलहरु भने बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म खुल्ने छन्। त्यस्तै अन्य पसलहरुलाई भने बिहान ११ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म खुल्न दिइएको छ।
होटेल, रेष्टुरेष्टको हकमा भने टकेअवे र होम डेलिभरी सेवामात्र दिन पाउने छन्। काठमाडौ । उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले मंगलवारवाट सार्वजनिक सवारी साधन संचालन गर्ने निर्णय गरे । मंगलवारवाट २५ सिटभन्दा माथिका सार्वजनिक सवारी साधन मात्र संचालन हुन्छन् । जसलाई जोरबिजोरका आधारमा चलाउन पाइन् छ । ठूला बसहरूलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर भोलिदेखि जोरबिजोरको आधारमा चल्न दिने निर्णय भएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए ।
Previous सबिता भण्डारी प्रकरण,कसैले नसोचेको रहस्य खुल्यो हेर्नुहोस भिडियो
Next भोलि बाट सार्वजनिक यातायात खुल्ने, निषेधाज्ञा थप्ने भन्ने बारे आयो यस्तो जानकारी